Big-O Notation · Programming For Beginner
Big-O Notation ဟာ program တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက် ထိ ထိရောက်မှုရှိလဲ။ Data များလာလေလေ ဘယ်လောက် ထိ အဆင်ပြေနိုင်မလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးဖို့ အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ program ၂ ခုမှာ ဆိုရင်တော့ ပထမ program ဟာ n ရဲ့ size ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့် ကြာမြင့်ပါတယ်။
import time def sum_of_n_loop(n): the_sum =0for i in range(1,n+1): the_sum = the_sum + i return the_sum def sum_of_n_eq(n): return n * (n+1) /2start = time.time() for i in range(100000,100100): sum_of_n_loop(i) end = time.time() print("Time is %.7f second" % (end-start)) start = time.time() for i in range(100000,100500): sum_of_n_eq(i) end = time.time() print("Time is %.7f second" % (end-start))
function ၂ ခု ကို ယှဉ်ကြည့်ရင် သိသိသာသာ ကွာခြားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ပထမ function ဟာ 1 ကနေ ပြီးတော့ n ထိ သွားပါတယ်။ တနည်းပြောရင် အကြိမ်အရေ အတွက် n ထိ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ array ၁၀၀ ရှိရင် အကြိမ် ၁၀၀ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့O(n) လို့ သတ်မှတ်ပါမယ်။
ဒုတိယ function ကတော့ ၁ ကြိမ်သာ အလုပ်လုပ်တယ်။ n က 1000 ဖြစ်နေလည်း ၁ ကြိမ်သာ အလုပ်လုပ်တယ်။ အမြဲတန်း constant ပဲ။ n ရဲ့ တန်ဖိုးပေါ်လိုက်ပြီး ပေါင်းလဲမှုမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် O(1) လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ graph ဆွဲကြည့်လိုက်ရင် အထက်ပါ ပုံ အတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Big-O Notation မှာ အောက်ပါ function တွေ ရှိပါတယ်။
n log(n) Log Linear
n ^2Quadratic
n ^3Cubic
2 ^ n Exponential
graph အနေနဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် အောက်ပါ ပုံအတိုင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
1 နှင့် log(n) က အကောင်းဆုံး algorithm တွေပါ။ n ကတော့ ပုံမှန် ပေါ့။ n log(n) ဟာ အစ ပိုင်းမှာ n ထက် မြန်နိုင်ပေမယ့် data များလာရင် နှေးလာပါလိမ့်မယ်။ n ^2နှင့်2^ n ဟာ အစပိုင်းမှာ မကွာပေမယ့် နောက်ပိုင်း data များလာလေလေ ကွာလာလေလေ ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ n ^3ကတော့ အနှေးဆုံးလို့ ဆိုရပါမယ်။
Big O မှာ ဘယ် function တွေ ဟာ ဘာအတွက်လဲဆိုတာကို လေ့လာရအောင်။
Constant ကတော့ ရှင်းပါတယ်။
looping တွေ ပါဝင်မနေပါဘူး။ processing ကို တစ်ကြောင်းတည်းနှင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
array ကို တဝက်ပိုင်းပြီး loop ပတ်သည့် algorithm တွေကို log(n) နှင့် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဥပမာ binary search ပါ။
Looping တစ်ခုတည်းပါရင်တော့ linear ပါ။
ဒါမျိုးဟာ O(n) ဖြစ်ပြီးတော့ linear ဖြစ်ပါတယ်။
log linear ဟာ merge sort, quick sort လိုမျိုး sorting တွေမှာ တွေ့ရပါမယ်။
ဒါကတော့ looping ၂ ထပ် အတွက်ပါ။
for k in range(len(array)):
looping ၂ ထပ် ကိစ္စတွေဟာ O(n^2) နှင့် တူညီပါတယ်။
ဒါကတော့ looping ၃ ထပ် ကိစ္စတွေပေါ့။
for w in range(len(array)):
ဒါကတော့ တွေ့ရတာ ရှားပါတယ်။ password တွေကို ဖြစ်နိုင်သည့် combinations တွေ ပေါင်းပြီး generate လုပ်သည့် algorithm တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
Big-O Notiation ကို ဘယ်လို တွက်မလဲ
အခု ကျွန်တော်တို့ Big-O Notiation အကြောင်း အနည်းငယ် သိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို တွက်ရမလဲ ဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။
1. Diffrent steps get added
အကယ်၍ algorithm မှာ မတူညီသည့် အဆင့်တွေ ပါလာခဲ့ရင် Big O ကို ပေါင်းပေးရပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင် O(a+b) ဖြစ်ပါတယ်။
2. Drop constanst
Big O မှာ constant တန်ဖိုးတွေပါဝင်ခဲ့ရင် ဖြုတ်လိုက်ဖို့ လိုက်ပါတယ်။
for k in array:
min = MIN(k,min)
max = MAX(k,max)
ဒီ function ၂ ခုကို ယှဉ်လိုက်ရင် ပထမ function ဟာ O(n+n) နှင့် ဒုတိယကတော့ O(n) လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ O(n+n) = O(2n) ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Big O Nototation တွက်သည့် အခါမှာ constant တန်ဖိုးတွေကို ဖြုတ်ချခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် program ၂ ခုလုံးဟာ O(n) လို့ပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။
3. Different Input, different variable
for c in array1:
for h in array2:
ဒီ code လေးကို ကြည့်လိုက်ရင် array ရှိသလောက်သွားတယ်။ looping ၂ ခု ဆိုတော့ n ^2ဖြစ်မယ်လို့ထင်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တန်းတော့ O(a*b) ပါ။aကတော့ array1 ရဲ့ size ဖြစ်ပြီးbကတော့ array2 ရဲ့ size ပါ။ အကယ်၍ variable တူခဲ့ရင်တော့ n ^2ဖြစ်ပါမယ်။
for h in array1:
ဒီ code ဆိုရင် looping ရဲ့ variable တူပါတယ်။ ဒီ array size ကိုပဲ ၂ ထပ် ပတ်ရတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် (n*n) ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် O(n^2) ဖြစ်ပါတယ်။
4. Drop non-dominate terms
အကယ်၍ n တွေဟာ တစ်ခု ထက်မက ပါခဲ့ရင် တန်ဖိုး တစ်ခုကိုပဲ ယူပါတယ်။ ဥပမာ။
min = MIN(c,min)
ဒီ code မှာ ပထမ loop က O(n) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ loop ကတေ့ O(n^2) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၂ ခုပေါင်းတော့ O(n+n^2) ရပါတယ်။
Big O notation ဟာ upper bound ဖြစ်သည့် အတွက် n နှင့် n^2 မှာ တန်ဖိုး ပိုကြီးသည့် n^2 ကိုသာယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် program ရဲ့ Big O Notation ဟာ O(n^2) ဖြစ်ပါတယ်။
Array Sorting Algorithm
ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အခန်းတွေမှာ array ကို sorting လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Array sorting Big O Notation ကို အောက်ပါ ဇယားမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Bubble Sort O(n^2)
Insertion Sort O(n^2)
Shell Sort O(n*log(n)) သည် အကောင်းဆုံး ရနိုင်ခြေဖြစ်ပြီး O(n ^ 1.25) သည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ပျမ်းမျှ တန်ဖိုးဖြစ်သည်
Merge Sort O(n log(n))
Quick Sort O(n log(n))
အခု sorting algorithm အချို့ကို Big O နဲ့ ထုတ်ကြည့်ရအောင်။
Bubble sort algorithm ကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။
for num in range(len(array) - 1,0,-1):
array[i] = array[i+1]
array[i+1] = temp
Bubble sort ဟာ array ကို ပထမ အကြိမ်မှာ array အခန်း တစ်ခု လျော့ပတ်တယ်။ ဒုတိယ အကြိမ် ၂ ခုလျော့ပတ်တယ်။ နောက်ဆုံး0ရောက်သည့် အထိ loop ပတ်တယ်။ တနည်းပြောရရင်
(n-1) + (n-2) + ... + 1 + 0
လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ n(n-1)/2 နှင့် တူပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် 1/2(n^2-n) နှင့် တူတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် O(1/2(n^2-n)) ဖြစ်ပါတယ်။ constant ဖြုတ်ချ ဖို့လိုသည့် အတွက် O(n^2-n) ဖြစ်ပါတယ်။ n^2 က n ထက် ပိုကြီးသည့်အတွက် bubble sort ဟာ O(n^2) ဖြစ်ပါတယ်။
Merge sort ဟာ အခြား sorting algorithm တွေထက် ပိုမြန်ပါတယ်။ သူက O(nlogn) ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့်ပါ။ Merge sort algorithm ကို ပြန်ကြည့် ရအောင်။
left_idx, right_idx = 0, 0
while left_idx < len(left) and right_idx < len(right):
if left[left_idx] <= right[right_idx]:
left_idx += 1
right_idx += 1
if left_idx < len(left):
if right_idx < len(right):
return merge(mergesort(w[:mid]), mergesort(w[mid:]))
recursive လုပ်ထားတယ်။ တနည်းအားဖြင့် array size အတိုင်း ပထမ အဆင့် loop ပတ်နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒုတိယ loop မှာ array size ကို တဝက်ချိုးလိုက်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ array size တစ်ဝက် ချိုးလိုက်သည်များကို log(n) ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။ log(n) တွေဟာ array size အကြိမ် အရေ အတွက် အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် n log(n) ဖြစ်ပါတယ်။ Big O အရ ဆိုရင် O(n log(n) ) ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ Big O notation အကြောင်း အနည်းငယ် တီးမိ ခေါက်မိပါပြီ။ ကျွန်တော် အခု ဖော်ပြထားသည်မှာ Big O notation ၏ အကြောင်းအရာ အနည်းငယ်မျှ သာ ဖြစ်ပါတယ်။